‘मुकेश चौरसियाको हत्याका योजनाकार राजकुमार गुप्ता’ - Janadesh Khabar
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का वीरगञ्ज महानगरपालिकाका इन्चार्ज रहवर अन्सारीले मुकेश चौरसियाको हत्याका योजनाकार राजकुमार गुप्ता भएको दाबी गरेका छन् ।
कार्तिक ६ गते विन्दाविसिनी गाउँपालिको नेकपाको कमिटीको सपथ ग्रहण कार्यक्रम थियो ।
अन्सारीका अनुसार कार्यक्रम भन्दा धेरै अघि को अध्यक्ष, को सचिव भन्ने लगायत कमिटी सदस्यहरु टोटल टुङिगइसकेको थियो । तर, गुप्ताले आफ्ना ६÷७ जनालाई कमिटीमा राख्न दवाव दिँदै आएका थिए । त्यो नभएपछि गुप्ताले मान्छे पठाएर गुप्ताकै योजना अनुसार सपथ ग्रहण विथोल्ने प्रयास भएको र त्यस क्रममा मुकेशको हत्या गराएको अन्सारीको दाबी छ ।
‘केही अराजक व्यक्तिहरु पुरा प्लानिङका साथ भाटा, बाँस लिएर कार्यक्रम बिथोल्न आए । मुकेश चौरसिया त्यहीँ हुनुहुन्थ्यो । अचानक भाटा चलाउन थाले । मुकेश चौरसियाको टाउकोमा हानिदिएछन् । मुकेश त्यहिँ ढले’ अन्सारीले भने ।
‘६ गते जुन घटना भयो त्यहि दिन बेलुकी सभासद राजकुमार गुप्ताको घरबाट मुकेशमाथि आक्रमण गर्ने अपराधीहरु समातिए । उनकै घरमा अपराधी फेला परेपछि गुप्तालाई पनि प्रहरीले उठाएर लगे । गुप्तालाई भेट्न जो नेताहरु गएका थिए उनीहरु सामु अपराध भएको र त्यसमा संलग्नलाई कारबाही गर्छु भने । तीन÷चार घण्टा राखेपछि प्रहरीले पनि गुप्तालाई छोडिदिए । तर, तिनै अपराधीहरुमध्ये दुई जनालाई भर्ना गर्ने बाहनामा नेशनल मेडिकल कलेजबाट भगाए । नेशनल मेडिकल कलेजको सञ्चालक बशुरुद्धिन अन्सारीले दुई जना भगाएका हुन् भन्ने छ’ अन्सारीले सुनाए ।
‘रौतहट घटनामा मोहम्मद आफताब आलम इँटाभट्टामा थिए कि थिएनन ? भन्ने कुरामा के भन्नुहुन्छ, थिए त ? थिएनन नी होइन । आफताब आलमलाई भट्टीबाट समातेको त होइन’ अन्सारीले भने, ‘औंलो उठाउनुपर्ने कहाँ छ भने, ति अहिले सम्पूर्ण समातिएका मान्छेहरु तिन(गुप्ता)को घरमा थिए त्यस (घटना भएको दिन) बेलुका । त्यहाँबाट समातिएका छन् ।’
अन्सारी अगाडि थप्छन, ‘रौतहट घटनामा मोहम्मद आफताब आलम मेन योजनाकार हुन भनेर आज उनी त्यहि सजाय भोगिरहेका छन नि होइन र ! रामचन्द्र प्यासी आफैँ गोली हान्न गएका त होइनन् । उनको योजनामा भएको भन्ने त किल्यर भयो ।’
अब प्रहरीको अनुसन्धानमा शंका छ
अब प्रहरीको अनुसन्धानमा शंका लागेको अन्सारीले बताए ।
‘अब अनुसन्धानमा टोटल्ली डाउटफुल छौं । पर्सा प्रहरीको अनुसन्धान बायस हुन्छ कि हुन्न भन्ने कुरामा हामी डाउट गर्छौं । किनभने, जसले जाहेरी लिन मानेनन् तिनले अनुसन्धान एकदम इमानदारीपूर्वक गर्छन भन्ने कुरामा म चाहीँ भन्न सक्दिन ।’
‘पर्सा प्रहरीको अनुसन्धान निश्पक्ष हुँदैन भन्ने सबैको मनमा आशंका छ । एसपीसहित प्रहरीको सम्पूण टिममाथि शंका छ । जाहेरी लिनबाट रोक्ने उनी हुन त । भनेपछि यिनले के अनुसन्धान गर्छन ? ’ अन्सारी भन्छन्, ‘तर, हामीलाई एउटा चित्त बुझ्दो कुरा– अब जाहेरी दर्ता भएर एउटा प्रक्रियामा गयो ।’
१४ कात्तिक २०७७, शुक्रवार ०८:१६ बजे प्रकाशित
३ मन्त्रीसहित २४ जना सांसदलाई कोरोनाले भेट्टायो